Weed duug ah oo ku jira bacaha hore • Drugs Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Doog duug ah oo boorsooyin duug ah ku jira
cannabisSharci dejinta & Sharci dejinta
albaabka Ties Inc. February 10 2022
maqaal by Ties Inc. February 10 2022
Nederland - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talo Sharci) (tiirarka KHLA)
1 Su'aalaha baarlamaanka
2 Si adag u rux
Iyadoo la raacayo Baaragaraafka daroogada ee heshiiska cusub ee isbahaysiga isagoo sheegay in "tijaabooyinka ku salaysan Xeerka Tijaabada Dukaanka Kafeega ee Xidhan la sii wadi doono laguna kordhin doono magaalo weyn" iyo in mowqifka dawladda ee warbixinta qiimaynta loo diri doono Goleyaasha horaanta 2024" iyadoo natiijada Kaliya waxaan rajeynayaa in hoos Rutte IV dabayl ka duwan ay dhici doonto marka ay timaado siyaasadda ku saabsan beerista (daawoyinka) xashiishadda iyo dukaamada qaxwada. Rajadaas waxaa qayb ahaan dhiirigeliyay xaqiiqda ah in wasiirka cusub ee VWS, Ernst Kuipers, uu ku jiro golaha wasiirada D66, oo ah xisbi si cad u taageersan in la sii hagaajiyo beerista xashiishadda iyo sharciyeynta daroogada jilicsan.
Laba xildhibaan oo ka socda D66, Wieke Paulusma iyo Joost Sneller, ayaa baarlamaanka waydiiyey su'aalo ku saabsan xashiishadda dawada iyo siyaasadda aan ku filnayn ee baahiyaha bulshada. Wasiir Kuipers ayaa hadda ka jawaabay su'aalahan baarlamaanka. Jawaabaha su'aalahan baarlamaanka ayaa ah kuwo aad looga xumaado oo macno ahaan la mid ah sidii sanadihii hore. Intaa waxaa dheer, jawaabaha sidoo kale ma dhameystirna oo waxaa ku jira qaar ka mid ah khaladaad muuqda.
"Beeritaanka xashiishadda, iyadoon loo eegin ujeedada loo sameeyay, waa mamnuuc Nederland."
Sheegashadani maaha mid sax ah, sababtoo ah beerashada xashiishadda iyada oo laga dhaafo, tusaale ahaan ujeeddooyin saynis ah, ama beerashada xashiishadda oo leh shati ku jirta macnaha tijaabada xashiishadda, waa sharci. Markaa hadafku waa arrin.
Intaa waxa dheer, sheegashadani waxay ugu horrayn xaqiijinaysaa doorasho siyaasadeed, taas oo rabitaanka aqlabiyadda Golaha Wakiillada la iska indhatiray. Sannadkii 2017-kii, Golaha Wakiilladu waxa uu ansixiyay a beddelka van GroenLinks, kaas oo ka dhigaya beerashada guriga ee haramaha dawooyinka suurtagalka ah, iyada oo loo marayo ka-dhaafitaanka isticmaalka caafimaad ee gaarka ah. Wax ka beddelkaani waa qayb ka mid ah hindise hindise Xildhibaanada Sneller iyo Sjoerdsma (labadaba D66), sharciga silsilada kafeega ee xidhan, kaas oo la socday Guurtida ilaa 2017.
"Beerashada guriga lama ogola. Haddii qofku u beero xashiishadda madadaalada ama daawaynta, beerista xashiishadda sharcigu waa mamnuuc.
"Xaalado adag ayaa ku xiran bixinta ka-dhaafitaanka beerista xashiishadda. Qof kasta oo doonaya inuu u qalmo ka-dhaafitaanka Xeerka Opium waa inuu buuxiyaa shuruudahan. Shuruudahan laguma dabooli karo arrinta ku saabsan beerashada guriga ee isticmaalka daawada.
Sida uu qabo wasiir Kuipers, suurtagal maaha in laga dhaafo beerashada xashiishka guriga, iyada oo aan loo eegin in xashiishadda loo beero madadaalo ama dawo ahaan. Tani waa wax cajiib ah, gaar ahaan markaad tixgeliso in beerashada guriga ee xashiishadda dawada ay runtii suurtogal tahay in wax laga beddelo Xeerka Opium-ka. Waxaan kula talin lahaa wasiirka inuu si fiican u eego wax ka beddelka GroenLinks laga bilaabo Febraayo 2017. Soo jeedintan waxay haysataa taageerada aqlabiyadda Aqalka Wakiilada, si uu si fudud ugu meel mariyo sharciga Opium.
Si adag u rux
"Waxaa jirta sabab wanaagsan oo ah in guriga lagu beero xashiishadda ay mamnuuc tahay. Beeralayda iyo xaafadda ay beerashadu ka dhacayso, waxa halis ugu jira dab, daadad, wasakhowga biyaha dhulka hoostiisa ku jira, ur urta, xatooyo koronto iyo khasaare soo gaadha guryaha. Taasi waa sababta fal-dembiyeed, maamul iyo madani ah sidoo kale looga qaadi karo beeraleyda guriga Adeegga Xeer Ilaalinta Guud, Duqa magaalada iyo mulkiilayaasha guryaha siday u kala horreeyaan.
Jawaabtan, wasiirka caafimaadka, daryeelka iyo isboortiga ee D66 sinaba uguma xisaabtamayo beeralayda guryaha yar yar ee beera dhowr geedo si ay u isticmaalaan. Wax aqoon ah kama hor istaagin, waaxda siyaasadda ee Wasaaradda Caafimaadka, Daryeelka iyo Isboortiga ayaa sida muuqata u qaadanaysa in beerashada gurigu inta badan ay ku lug leeyihiin beeraley waaweyn oo sharci darro ah oo khatar ku ah deegaankooda iyo bulshadooda. Waa in tallaabo adag laga qaadaa arrintan, gaar ahaan maamulka deegaanka, sida uu sheegay wasiirku.
“Aniga oo ka duulaya qodobka 13b ee xeerka Opium-ka, waxa uu maayarku awood u leeyahay in uu wax ka qabto marka dawooyinka la iibinayo, la keeno ama la bixinayo ama la joogo guryaha ama dhismooyinka ama hanti la xidhiidha, ama marka shay ama walxo la helo loogu talagalay diyaarinta ama beerashada daroogada. Iyadoo la ilaalinayo shuruudaha saami qaybsiga iyo qaybsiga, duqa magaaladu wuxuu soo saari karaa digniin, wuxuu soo rogi karaa amar ganaax ah ama xidhi kara dhismo ama hanti la xidhiidha iyada oo loo adeegsanayo awood maamul."
Inta lagu jiro saynisyahano ka socda Jaamacadda Gobolka Groningen iyo falanqeeyayaasha sharciga ee caanka ah, sida Folkert Jensma (NRC) aaminsan in tani ay aad u fog tahay. Tan iyo arrintii gunnooyinka, Golaha Dawladdu wuxuu kaloo bilaabay inuu si dhow u eego ku dhaqanka tallaabooyinka maamul ee maayarrada. Gudaha hadal dhawaan Laga bilaabo bilawga bisha Febraayo 2022, Qaybta Xukunka Maamulku waxay ku soo gabagabowday in hadda laga bilaabo ay tahay in la qiimeeyo in go'aanka ay dawladdu qaadato aanu si siman u naxdin muwaadiniinta.
Go’aanka uu maayarku ku xidhay guri, tusaale ahaan xashiishka guriga dhexdiisa lagu beero, ma la siman yahay yoolka ay dawladdu doonayso inay arrintan ku gaadho? Cawaaqibta go'aankan oo kale miyay la siman yihiin maslaxadda uu ku shaqeeyo? Waa su'aalo muhiim ah oo ay tahay in laga jawaabo hadda wixii ka dambeeya, ka hor inta uusan duq magaalo go'aansan in uu qaado tallaabooyin fog sida in guri la xiro. Sida muuqata wasiirka caafimaadka, daryeelka iyo ciyaaraha ayaa seegay go’aankan dhaxal-galka ah ee Golaha Dawladdu.
Khatarta caafimaadku waxa kale oo lala xidhiidhin karaa isticmaalka xashiishadda aan dawooyinka ahayn ee dawooyinka loo isticmaalo. Xashiishada guriga lagu beero ama kafeega laga iibsado guud ahaan waxa ka maqan tayo la jaan-gooyey oo la lafaguray. Tani waxay ka dhigan tahay in maaddooyinka ay ku kala duwan yihiin qorshe kasta iyo goosashada, sidaas darteed lama qiyaasi karo, sida kiiska daawada. Intaa waxaa dheer, walxaha waxyeellada leh, sida sunta cayayaanka, ayaa badanaa la isticmaalaa. Sidoo kale, xashiishadda guriga lagu beero ama lagu beero dukaanka qaxwaha laguma eego fangaska.”
Marka hore, qofna ma yaqaan xashiishadda cannabis oo lagu beeray dukaan kafeega. Tani waa wax aan macquul aheyn, gaar ahaan marka la eego hubinta adag iyo hubinta joogtada ah ee dukaamada qaxwada ee booliisku. Marka labaad, xashiishadda guriga lagu beero ama laga iibsado dukaan kafeega “guud ahaan ma laha tayo la jaan-gooyey oo la falanqeeyey” sababtoo ah waa mamnuuc sida uu dhigayo sharciga Opium in lagu tijaabiyo xashiishaddan (ama lagu tijaabiyey) shaybaadhka.
Cannabis waa dawada jilicsan ee loogu iibinta badan yahay Nederlaan. Si kastaba ha ahaatee, ma cadda waxa ay ka kooban tahay iyo inta maaddooyinka firfircoon ee ay ku jiraan. Waxay macno badan samayn lahayd in sidoo kale loo dulqaato tijaabinta haramaha ee dukaamada qaxwada, si ay macaamiishu u ogaadaan waxa ku jira iyo waxa ay iibsanayaan. Xaaladdan ammaan-darrada ah, oo sida uu sheegay wasiirka caafimaadka, daryeelka iyo ciyaaraha xitaa ay keenayso khataro caafimaad, waa doorasho siyaasadeed. Wasiirku waxa uu leeyahay ikhtiyaarka ah in uu beddelo siyaasadda, tusaale ahaan in uu beddelo sharciga Opium-ka ama in uu u oggolaado dukaamada qaxwada in haramaha ay iibiyeen ay ku tijaabiyaan shaybaar. Taasi waxay noqon doontaa tillaabada ugu horreysa ee wanaagsan sharciyo dheeraad ah oo beerashada xashiishadda iyo sharciyeynta daroogooyinka jilicsan iyo sidaas darteed si sax ah oo waafaqsan waxa D66 ujeedadeedu tahay in la gaaro.
Waa nasiib darro weyn, in wasiirka cusub ee caafimaadka D66 aanu ku doodin siyaasad ka duwan, marka laga hadlayo xashiishadda iyo xashiishadda dalka laga soo saaro ee lagu baadho kafeega, taas beddelkeedana ay ku dhegganaato khadadka adag ee sannadahan dambe. Sidaas kuma sii heli karno.
Rajada aan ka qabay in dabayl ka duwan ay ku hoos dhici doonto Rutte IV marka ay timaaddo siyaasadda ku saabsan beerista (caafimaadka) xashiishadda iyo dukaamada qaxwaha ayaa jawaabahan la laalay. Halka xitaa waddan sida Jarmalka uu hadda aaminsan yahay in sharciyeynta xashiishadda ay ka wanaagsan tahay sii wadida siyaasadda cadaadiska ee hadda jirta, sababtoo ah "sharciyeyntu waxay xakameyn kartaa tayada xashiishadda, ka hortagtaa wasakhda waxayna si fiican u ilaalin kartaa carruurta," Wasiir Kuipers ayaa ku celceliyay hits ugu weyn ee labada Donner iyo Opstelten. Beerista waa mamnuuc! Beerashada guriga lama ogola! Xashiishadu waxay keenaysaa khataro caafimaad! Si adag u dhaqan!
Wasiir Kuipers intii uu ku odhan lahaa weedho madhan oo uu ku celcelin lahaa maantooyadii cabudhinta ahayd ee madaxdii ka horaysay, waxa la gudboon Wasiir Kuipers in uu si fiican u barto mawqifyada xisbigiisa. u fiirso rabitaanka Golaha iyo bulshada marka xashiishka laga hadlayo. Doorashooyin kale ayaa sidoo kale suurtogal ah gudaha jaantusyada siyaasadda daroogada ee hadda jirta. Tani waxay u baahan tahay geesinimo iyo caqli-gal siyaasadeed. Anigoo ka duulaya jawaabahaas, waxaan ku soo gabagabeynayaa in Wasiir Kuipers uu hadda ka maqan yahay labadaba.
cannabisbeerista cannabissiyaasadda daroogadasharciyeyntasharci-dejintaNederlandsharcigabaaritaanka weedbeerista cannabis
Malta waxay dib u habayn ku samaysaa siyaasadda xashiishadda waxayna dejisaa heer wanaagsan Yurub
Soo dejinta daroogada iyo hubka: Askariga caanka ah ee Rotterdam oo looga shakisan yahay inuu xiriir la leeyahay mokro-maafiyada
Dawladda Trump waxay waydiisaneysaa talooyin ku saabsan dib-u-dejinta cannabis
Soo saaraha xashiishadda Aphria waxay u aragtaa fursadaha magacaabista ...